1 Ndị Kọrịnt 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi Mbụ E Degaara Ndị kọrịnt 16:1-24
Ịnakọta onyinye a ga-ezigara Ndị Kraịst nọ na Jeruselem (1-4)
Otú Pọl ga-esi gaa ebe ndị ọ chọrọ ịga (5-9)
Ebe a chọrọ ka Timoti na Apọlọs gaa (10-12)
Agbamume na ekele (13-24)
16 N’okwu gbasara ịnakọta onyinye a ga-enye ndị nsọ,+ na-emenụ ya otú ahụ m gwara ọgbakọ ndị dị na Galeshia ka ha na-eme. 2 N’ụbọchị mbụ n’izu ọ bụla,* ka onye ọ bụla wepụta ihe ọ ga-enye otú aka hà ya, ka unu ghara ịnakọta onyinye mgbe m rutere. 3 Ma mgbe m rutere, m ga-agwa ụfọdụ ndị ka ha gaa Jeruselem wega onyinye unu ji obi unu niile weta. Ndị m ga-eziga bụ ndị unu dere n’akwụkwọ ozi unu+ na unu tụkwasịrị obi. 4 Ma, ọ bụrụ na m kwesịkwara ịga ebe ahụ, mụ na ha ga-eso gaa. 5 Ma m ga-abịa hụ unu ma m gachaa Masedonia, n’ihi na m chọrọ isi Masedonia bịa.+ 6 M bịa, mụ na unu nwere ike ịnọtụ. M nwedịrị ike ịnọ oge oyi agafee, ka unu wee dupụ m ma m gawa ebe ọzọ m ga-aga. 7 N’ihi na achọghị m ịhụ unu ugbu a m na-agafe agafe, ebe ọ bụ na m nwere olileanya na m ga-abịa ka mụ na unu nọtụ,+ ma Jehova* kwe. 8 Ma m ga-anọ n’Efesọs ebe a+ ruo ụbọchị Ememme Pentikọst, 9 n’ihi na e meela ka m nwee nnukwu ohere ịrụ ọrụ Onyenwe anyị.*+ Ma ọtụtụ ndị na-emegide m. 10 Ọ bụrụ na Timoti+ erute, gbaanụ mbọ mee ka ahụ́ ruo ya ala, n’ihi na ọ na-arụ ọrụ Jehova*+ otú m na-arụ. 11 N’ihi ya, ka onye ọ bụla ghara ileda ya anya. Dupụnụ ya n’udo, ka ọ bịakwute m, n’ihi na mụ na ụmụnna ndị ọzọ na-eche ya. 12 Agbasiri m Apọlọs+ nwanna anyị ume ike ka o soro ụmụnna ndị ga-abịakwute unu. Ma ọ chọghị ịbịa ugbu a. Ọ ga-abịa mgbe o nwere ohere. 13 Mụrụnụ anya.+ Meenụ ka okwukwe unu sie ike.+ Nweenụ obi ike,+ siekwanụ ezigbo ike.+ 14 Jirinụ ịhụnanya+ na-eme ihe niile unu na-eme. 15 Unu ma na ezinụlọ Stefanas bụ ndị mbụ ghọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs* n’Akeya, ha wepụtakwara onwe ha na-ejere ndị nsọ ozi. N’ihi ya, ụmụnna m, m na-agba unu ume ka unu na-eme ihe a: 16 Na-edonụ onwe unu n’okpuru ndị dị otú ahụ nakwa n’okpuru ndị niile so anyị na-arụ ọrụ ma na-arụsi ya ike.+ 17 Ma m na-aṅụrị ọṅụ na Stefanas+ na Fọtunetọs na Akeikọs nọ ebe a, n’ihi na ha enyerela m ezigbo aka unu gaara enyere m. 18 Ha agbaala mụ na unu ume. N’ihi ya, na-akwanyerenụ ndị dị otú ahụ ùgwù. 19 Ọgbakọ ndị dị n’Eshia na-ekele unu. Akwịla na Priska nakwa ọgbakọ dị n’ụlọ ha+ ji obi ha niile na-ekele unu, unu ndị ha na ha na-eso ụzọ Onyenwe anyị. 20 Ụmụnna niile na-ekele unu. Susuonụ ibe unu ọnụ mgbe unu na-ekele ibe unu.* 21 Mụnwa bụ́ Pọl na-ekele unu. Ọ bụ m ji aka m na-ede ekele a. 22 Ọ bụrụ na ọ dị onye na-ahụghị Onyenwe anyị n’anya, a ga-abụ ya ọnụ. Onyenwe anyị, biko, bịa. 23 Ka Onyenwe anyị Jizọs meere unu amara. 24 M hụrụ unu niile n’anya, unu ndị ha na Kraịst Jizọs dị n’otu.
^ Na Grik, “e megheerela m ọnụ ụzọ buru ibu nke m ga-abanye rụọ ọrụ.”
^ Na Grik, “mkpụrụ mbụ.”